သင့် iPhone နှင့် iPad ကို iOS 11 သို့မွမ်းမံနည်း အိုင်ဖုန်းသတင်း
iOS 11 မွမ်းမံမီဘာလုပ်ရမည်နည်း
ဟိုဆေး Alfocea | | iOS 11, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
နောက်ဆုံးသုံးလကျော်ကြာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် လာမည့်စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင် Apple သည် iOS 19 ၏တရားဝင် version ကိုဖြန့်ချိမည်အသစ်ပြုပြင်ထားသော application ဒီဇိုင်း (မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ အက်ပ်စတိုး၊ မေးလ်စသည်)၊ ပိုမိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာနှင့်အတူ iPhone, iPad နှင့် iPod touch များအတွက်မိုဘိုင်း operating system ဗားရှင်းသစ်ကိုမှန်ကန်စွာပြောင်းလဲခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ iPad ပေါ်ရှိ multitasking လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များ၊ လုံးဝသက်တမ်းတိုးပြီးအသုံးဝင်သော dock တစ်ခုနှင့်နောက်ဆုံးတွင် iOS အတွက်စစ်မှန်သော file manager ကိုထောက်ပံ့ပေးသော Files app တစ်ခုဖြစ်သည်။
လာမည့်အင်္ဂါနေ့တွင်သန်းနှင့်ချီသောသုံးစွဲသူများသည်ဗားရှင်းအသစ်များကို၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးတပ်ဆင်ရန်အလျင်အမြန်လုပ်ဆောင်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်၊ သင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရရှိလိုပါကယခင်ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်းလိုက်နာသင့်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းသင်ပြောပြပါမည် iOS 11 မွမ်းမံမီသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှ.
သိသာထင်ရှားသော်လည်း iOS 11 ကိုမွမ်းမံရန်လိုအပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch သည်သဟဇာတမဖြစ်၊ မမှန်စစ်ဆေးပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင် Apple သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရက်ရောစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်တမ်းသည် (၄) နှစ်ကျော်သော terminal များကို update လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။
ဒါကဖြစ်ပါသည် iOS 11 သဟဇာတထုတ်ကုန်များ၏စာရင်းအပြည့်အစုံ:
iPhone 5S နောက်ပိုင်း iPhone 8, 8 Plus နှင့် iPhone X တို့ပါ ၀ င်သည်
နောက်ပိုင်းတွင် iPad Mini 2
iPad Air နှင့် iPad Air 2
iPad Pro: ၉.၇၊ ၁၀.၅ နှင့် ၁၂.၉ လက်မမော်ဒယ်များ
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ application အမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းမိလာသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးမပြုတော့တော့ဘဲမေ့သွားသည်၊ ဖိုင်တွဲတစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းခံရပြီး၎င်းသည်နောက်ဆုံးမြင်ကွင်းဖြစ်သောဘေးအန္တရာယ်အံဆွဲသို့ထွက်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်နံပါတ်အမြောက်အများရှိနိုင်သည်။ ကိရိယာတွင်နေရာယူထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့လုံးဝမလိုအပ်သောဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအထူးသဖြင့် WhatsApp မှကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်မည်ဟုယူဆပြီးပို့ပေးသောသူများဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် DropBox ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုပါကသင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ထဲသို့ဖိုင်များကိုသင့်ဒေသတွင်းရှိစရာမလိုတော့ပါ။ ဤအရာအားလုံးသည်သင် iOS 11 သို့အဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သည့်တန်ဖိုးရှိသောနေရာတစ်ခုသို့မဟုတ်ပိုကောင်းသောအရာများကိုသင်ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်အဲဒီအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ခြင်းဟာ iOS 11 ကိုမွမ်းမံခင်သင်လုပ်သင့်တဲ့နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်အလွန်အသုံး ၀ င်လိမ့်မယ်။
သင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad မှသင်မလိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါ (သို့မဟုတ်) သင်အသုံးမပြုတော့သောအသုံးချပရိုဂရမ်များမှဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများစသဖြင့်၊
ပြီးတော့မင်းက သင်၏အက်ပ်များအားလုံးကိုမွမ်းမံရန်သေချာပါစေ ၎င်း၏နောက်ဆုံး version သို့ ထိုသို့ပြုရန် App Store ကိုဖွင့ ်၍ "Updates" အပိုင်းကို နှိပ်၍ ဆိုင်းငံ့ထားသည့်အပ်ဒိတ်ကိုအသစ်ပြောင်းပါ။
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အရေးအကြီးဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ယခုသင်၌သင်၏စက်ပစ္စည်းအဆင်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်သည် သင်၏အကြောင်းအရာ၊ ဒေတာနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုအရန်ကူးထားပါ။ update လုပ်စဉ်အတွင်းအမှားတစ်ခုအမှန်ဖြစ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်က iPhone News မှအဆက်အသွယ်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဖိုင်များနှင့်အခြားအရာများဆုံးရှုံးခြင်းကိုမစွန့်စားလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရန်သင့်အားပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပေးပါသည်။ လုံခြုံရေးမိတ္တူ။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်နည်းစနစ်များ (သို့) စနစ်များစွာဖြင့်အရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လျှောက်လွှာကိုအကြံပြုပါမည် AnyTrans, စပိန်အပါအဝင်ဘာသာစကားများစွာဖြင့်ရရှိနိုင်, သောအရာတို့ကိုအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေသည်သူတို့စပိန်စကားပြောအသုံးပြုသူများကိုဂရုစိုက်ကြောင်းပြသသည်။
AnyTrans သင်လုပ်နိုင်သောဖိုင်လွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည် သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ၏အချက်အလက်များကိုသင်၏ Mac သို့မဟုတ် PC ပေါ်တွင် iCloud၊ iTunes ရှိမိတ္တူကူးယူပါ။ ပြီးတော့ဒါကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်တဲ့နည်းနဲ့လည်းသင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်အထက်ပုံမှာမြင်ရသလိုပါပဲ ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းအင်တာဖေ့စနှင့်အလွန်အလိုလိုသိကိုင်တွယ်.
"Backup Manager" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
"Device Manager" ထဲမှာ
"Content to Mac / Pc" ကိုနှိပ်ပါ။
AnyTrans တွင်သင်လုပ်နိုင်သည် ကိရိယာများစွာကိုချိတ်ဆက်ပါ တစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့်သင်၏အဆက်အသွယ်များ၊ မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများ၊ ဖွင့်စာရင်းများ၊ စာများ၊ မှတ်စုများ၊ ပြက္ခဒိန်များ၊ Safari ဘုတ်မှတ်များနှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့ iTunes သို့ (သို့) iCloud သို့လုံးဝလုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းတိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပါ။ AnyTrans သည် Apple ကဲ့သို့ encryption နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အားလုံးကိုအပြည့်အဝအရံသိမ်းဆည်းထားရန်အာမခံပါသည်။
ထို့အပြင် AnyTrans သည်သင့်အားပေးသည် သင်ပြန်လည်ရယူလိုသည့်အရာအပေါ်အကြွင်းမဲ့အာဏာထိန်းချုပ်ခြင်း ကောင်းပြီ, သင်နောက်ဆုံးအားလပ်ရက်၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဓာတ်ပုံတစ်ခုသို့မဟုတ်ရွေးချယ်ထားသည့်စာရွက်စာတမ်းကဲ့သို့သင်လိုအပ်သည့်အရာကိုသာကြည့်ရှုရန်နှင့်ပြန်လည်ရယူရန်အတွက်ထို iCloud နှင့် iTunes ရှိအရံသိမ်းဆည်းမိတ္တူများကိုလည်းသင်ရယူနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ဒီ application ကတခြား function များစွာကိုပေးပါတယ် တစ် ဦး device ကို Clone, Android မှ iOS သို့ပြောင်းပါ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ, မျိုးစုံသော iCloud အကောင့်များကိုစည်းညှိပါ iOS 11 သို့မခိုးမီ (သို့) ခိုးယူခံရလျှင် (သို့) အရှုံးခံရလျှင် iPhone သို့မဟုတ် iPad အတွက်အရံအဖြစ်သိမ်းဆည်းခြင်းအပြင်၊ နောက်ဆုံးပေါ် AnyTrans ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ဒီမှာ.
backup အဆင်သင့်ရှိပါကယခုသင်သည် iOS 11 သို့ OTA မှတဆင့်သို့မဟုတ် iTunes မှလုံခြုံစွာ update လုပ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်သောအမှားများကိုသင်မဆွဲချင်ပါကသန့်ရှင်းသောပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » iOS 11 မွမ်းမံမီဘာလုပ်ရမည်နည်း
ဒါကို "Update" လို့ခေါ်တယ်၊ ဒီမှာမွမ်းမံမှုမတိုင်ခင်ငါတို့ပြောကြတယ်။ အကယ်၍ ... ကျနော်တို့ hahaha ဘယ်မှာကျနော်တို့မဟုတ်ပါဘူး။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ!
Anytrans မှကမကထပြုသောပို့စ် ...
ခေါင်းစီးတွင် "ကြော်ငြာခြင်း" ထည့်သွင်းခြင်းသည်ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
ကောင်းမွန်သောကြေငြာချက်၊ အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ရန် iOS11 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အလွန်ကောင်းသည်။ ဒါဟာအတူတူခံစားရ ... နှင့်အများကြီး။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုပြောင်းကုန်ပြီ၏ကြေငြာချက်ချသကဲ့သို့, hahahahaha ။
ဒီဆောင်းပါးကို "AnyTrans ကကမကထပြုတယ်" လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်
မျက်လုံး! မွမ်းမံခြင်းမပြုမီသင်အရန်ပြုလုပ်ရမည်! ပြီးခဲ့သည့်နှစ် iOS 10 ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏အရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ရွှေ Master သည်နောက်ဆုံး iOS ဖြစ်မည်လော။
ငါ update ကိုမရကြဘူး။ ဒါကြောင့်ငါစွန့်ခွာသင့်တယ်ငါ့မှာ iPad3mini ရှိသည်
iOS 11 GM တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုတပ်ဆင်ရန်အလားတူလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်လော။
Apple က iPhone X နှင့် iPhone 8 Plus အတွက် AppleCare + ပိုမိုစျေးကြီးစေသည်
Clive Davis ၏ဘ ၀ အကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည်အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင် Apple Music သို့ရောက်ရှိသည်